GOVERNORAN’NY FARITRA SOFIA : Napetraka tamin’ny fomba ofisialy omaly
Ny Kolonely Lylison René de Rolland no voatendry ho Governoran’ny Faritr’i Sofia. Tontosa omaly maraina ny fametrahana tamin’ny fomba ofisialy ny maha governora azy. 15 octobre 2019
Tonga tany an-toerana nanome voninahitra ny lanonana sady nitarika ny fotoana nandritra izany ny Minisitry ny Atitany sy ny fitsinjaram-pahefana, Tianarivelo Razafimahefa, ny minisitry ny Fitsarana, Andrianasolo Jacques ary ireo olo-manan-kaja maro sivily sy miaramila. Nanome toky fa hampandry fahalemana ny Faritr’i Sofia ny Governora, Lylison René de Rolland. Nambarany fa hisy ny fanomezana fampitaovana vaovao ny mpitandro filaminana any an-toerana hanafoanana ny asan-dahalo. Hatsaraina sy hampanarahana ny lalàna misy eto amin’ny firenena koa ny « Dina » izay efa misy ao amin’ity Faritra ity.
« Mahazo matoky Andriamatoa Filoha fa ao ny Tafika hiantoka ny fandriam-pahalemana, hanohana ara-pitaovana an’ireo ny tenako ary hanome ny traikefa rehetra izay efa nananako satria ny tanjontsika dia i Sofia milamina, Sofia mandroso. Ao anatin’ny veliranon’ny Filoham-pirenena ny resaka dina, hampanarahantsika ny ara-dalàna io dina io ary hotanterahintsika avokoa ny velirano rehetra efa nambaran’ny Filoha », hoy ny nambarany.
Fototra iaingan’ny fampandrosoana ny Governora
Tsy an-teny fotsiny ihany fa tena nampiharina tokoa ny fitsinjaram-pahefana tena izy, araka ny vina izay efa nambaran’ny Filohan’ny Repoblika Andry Rajoelina. Nohamafisin’ny Minisitry ny atitany io raha nametraka ity Governoran’ny Faritr’i Sofia ity tamin’ny fomba ofisialy tany an-toerana izy. « Fototra iaingan’ny fampandrosoana ny Faritra ny fisian’ny Govenora ary tena manana andraikitra lehibe sahanina amin’izany », hoy ny minisitra. Nomarihiny teto koa fa hiantoka ny fandriam-pahalemana any amin’ny Faritra rehetra misy azy ireny Governora ireny. Tsiahivina fa isan’ny olana lehibe nampikaikaika ny mponina tao amin’ny Faritr’i Sofia ny mahakasika io tsy fandriam-pahalemana io teo aloha. « Tsy vitan’ny fanjakana irery ny fampandrosoana fa mila ny fifanomezan-tanan’ny vahoaka malagasy rehetra », hoy hatrany ny Minisitry ny atitany sy ny fitsinjaram-pahefana, Tianarivelo Razafimahefa.
14 oktobra 1958 no niditra tao anatin’ny rafitra repoblikana voalohany i Madagasikara. Nosafidiana manokana, araka izany ity 14 oktobra ity satria daty iray isan’ny manan-tantara eto amin’ny firenena. Nomena voninahitra sy notsiahivina manokana nandritra ny lanonana, omaly koa ny rain’ny fahaleovan-tena sady Filohan’ny Repoblika voalohany, Tsiranana Philbert. Tsiahivina fa talohan’ny lanonana dia nisy koa ny famindram-pitantanana teo amin’ny lehiben’ny Faritra mpisolo toerana sy ny governora voatendry.